Uyifaka njani iigridi okanye imida kwiMicrosoft Excel
Unokufaka iigridi okanye imida kwiishiti zomsebenzi zeMicrosoft Excel. Imigca yegridi yimigca etyheli, engwevu-luhlaza oyibona kwiscreen esahlula imiqolo kunye neekholamu. (Ngokuzenzekelayo, iigridi zibonakala kwiscreen kodwa zingashicilelwa.) Imida yimigca ebonakala macala onke nangaphezulu kweseli nganye.
Ukulawula indlela iigridi ezibonakala ngayo, bonisa ubeko lwephepha ithebhu uze uphawule okanye ucofe iMboniselo kunye / okanye uPrinte iibhokisi zokujonga kwiQela loKhetho / iqela leGridline. (Kukho imigca yeebhokisi zemigca kwithowuni yokujonga Jonga kuphela iscreen esibonisiweyo, hayi isetingi yoshicilelo.)
i-paroxetine yinto elawulwayo
Imida ingaba nayiphi na imibala okanye ubukhulu obufunayo. Imida ihlala ibonisa kwiscreen kwaye isoloko iphrinta, ngaphandle kwezicwangciso. Imida iluncedo ekuncedeni amehlo omfundi alandele isicatshulwa kwiphepha eliprintiweyo, kunye nokuchonga ukuba zeziphi iinxalenye zespredishithi ezihamba kunye ngokufanelekileyo.
Eyona ndlela ilula yokufaka kunye nokufomatha imida kukusebenzisa uluhlu lwemida yeqhosha lokuhla ezantsi kwi-Home tab. Khetha uluhlu lweeseli ofuna ukufaka kuzo umda, khetha iKhaya → Ifonti → Imida. Ukusuka kuluhlu lwemida ebonakalayo, khetha eyona imele eyona miba ufuna ukufaka kuyo umda.
Umda uya kusebenza kwimida engaphandle kwoluhlu olukhethileyo. Umzekelo, ukukhetha uMda oPhezulu kusebenza umda ophezulu kuphela kwiiseli ezikumqolo ophezulu woluhlu, hayi phezulu kwiseli nganye kolo luhlu.
Ukongeza umda kuwo onke macala eseli nganye kuluhlu: Khetha yonke iMida.
Ukususa umda kuwo onke amacala azo zonke iiseli kuluhlu olukhethiweyo: Khetha akukho Mda.
Ukongeza imida ngaphezulu kwelinye icala kodwa hayi macala onke: Phinda le nkqubo amatyeli amaninzi, ixesha ngalinye ukhetha icala elinye.
Ukuba ufuna ukukhetha umbala othile, isimbo, okanye ubunzima bomda, khetha iKhaya → Ifonti → Imida → Imida engakumbi. Ibhokisi yencoko yebhokisi yencoko ibonakala kwiTebhu yomda ebonisiweyo. Kwindawo yesimbo, cofa isitayile somgca osifunayo. Kwindawo yombala, vula uluhlu olwehlayo kwaye ucofe umbala owufunayo. Kwindawo yase-Presets, cofa u-preset wamacala ofuna ukufaka kuwo umda ku: Akukho, ngaphandle, okanye ngaphakathi. Cofa Kulungile.
Ukuba ufuna umda ojikeleze icala ngalinye leseli nganye, cofa zombini uLwandlalo noNgaphakathi.
Ukuba ukhetha isitayile somda kunye nombala kodwa ungawusebenzisi nakulo naliphi na icala loluhlu, oko kufana nokukhetha kwanto kwaphela.
oyster iqokobhe lecalcium enevithamini d
Ungayiqala njani kwakhona iMacbook pro
Ungaguqulela njani kwifom esemgangathweni
nini ukusebenzisa ispanish
Ixabiso le-bupropion 150 mg
injani ipilisi ye-oxycontin